I-Pocophone F1 iya kuba nemowudi yeTurbo yomdlalo kungekudala | I-Androidsis
Umdlalo iTurbo yitekhnoloji kaXiaomi, yenzelwe ukuphucula ukusebenza xa udlala kwifowuni. Yinto efanayo ne-GPU Turbo ethi imbeko kwintengiso. Kwimeko yeXiaomi, iXiaomi Mi 9 ibingumzekelo oyifakileyo. Nangona i-brand sele iqinisekisile ukuba iza kuphehlelelwa kwiifowuni ezininzi. Into eyenzekayo ngoku ngokusungulwa kwayo kwiPocophone F1.
Ngale ndlela, abasebenzisi abanePocophone F1 baya kuba nakho babe namava angcono xa bedlala nefowuni. Kuba lo msebenzi uza kubavumela ukuba basebenze ngcono kwesi sixhobo ngale ndlela, njengoko sele kwaziwa ngokusemthethweni.
Le Game Turbo evela kuhlobo lwesiTshayina yile Iya kwanda phakathi kuka-Matshi no-Epreli ukuya kwiifowuni ezingaphezulu zohlobo lweTshayina. Enye yeemodeli ezinokufikelela kuyo yile Pocophone F1. Kwimeko yakho, kulindeleke ukuba uyifumane kwiintsuku nje ezimbalwa. Ke abasebenzisi baya kuba nale ndlela.
Ngelo xesha Kwi-beta entsha ye-MIUI yehlabathi ungawufumana lo msebenzi. Nangona ukukhutshwa kwayo okuzinzileyo kuya kubakho kwiiveki ezimbalwa. Nangona inkampani ingasinikanga imihla ethile ngalo mzuzu woku. Kodwa kwiintsuku ezimbalwa ngokuqinisekileyo siya kuba nedatha ethe kratya.
Ke kubasebenzisi abanePocophone F1 kunjalo into yokulinda nje kancinci de ukumiselwa kwayo kuqinisekiswe. Kodwa ngolu hlobo, xa ufuna ukudlala imidlalo efana neFortnite okanye iPUBG kwifowuni, uya kuba nokusebenza okungcono kuyo. Into ebaluleke kakhulu.
UXiaomi uzakuyazisa le ndlela kwiifowuni ezininzi, Ngaphandle kwale Pocophone F1. Nangona inkampani ingakhange ichaze ukuba zeziphi iifowuni eziya kuba nokufikelela kuyo. Siyathemba ukuba sinolwazi olongezelelekileyo malunga noku kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IPocophone F1 ifumana imowudi yeTurbo yeMidlalo
Uyikhuphela njani i-APK ngqo kwiVenkile yeGoogle Play